Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid oo ku saabsan My Family for Windows Phone
Isku of technology internet oo mobile in uu is beddelay nolosheena si wayn, oo inta badan u wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dad badan oo luuqyo madow ee dunida ka mid ah internetka, sida adduunka dhabta ah, kuwa aad had iyo jeer doonayo inuu sii qoyskaaga, gaar ahaan caruurtaada, laga ilaaliyo.
In dunida maanta, iyo baqdin naga nololeed casri ah, waa caadi ahaan carruurta yaryar si ay leeyihiin casriga ah oo u gaar ah, oo ma fududa in la sii tab ah oo ku saabsan waxa ay caruurta aad soo degsado, daawashada, is bandhigi marka aan foodda la saarin in online ah adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, dhalashada ee 8.1 Nokia Lumia iyo Windows Phone ee gmail, u diraynaa waalidka ayaa lagu xalliyo sida marna ka hor. Oo ay ku samaysay wax loo yaqaan, Windows Phone My Family.
Waa maxay My Family for Windows Phone
Macneeyeen magacaabay, My Family Windows Phone waa adeeg nidaamsan u ogolaanaya waalidiinta in ay isha ku hay hawlaha online carruurtooda la isticmaalayo casriga ah. Waxaad la socon kartaa Chine oo kulan la bixi by caruurta aad on qalabka ay mobile iyo wax ka badan.
All in aad sameyso waa dhaqaajiso adeega Family My waqtiga u fidinno telefoonka aad kid ee, by galaya da'dooda oo qayb ka ah kaakicin dukaamada waaweyn, waxayna u. Marka sameeyo, caruurta, waalidka maamulka si ay u ansixiyaan ama hoos u download ee Chine iyo ciyaaraha iwm yeelan doontaa
Xitaa Waxaad sameyn kartaa noocyo app in ilmahaaga loo ogolaan lahaa in ay ka soo dejisan ah, tusaale ahaan, lacag la'aan ah, ku bixisay, labada ama ma Chine. Waxa kale oo aad ka qaban karta heerka rating ee kulamada in ilmahaagu wuxuu noqon doonaa in ay kala soo bixi karin.
Halkan waxaa ku qoran liiska My Family muuqaalada ku jira hubaal doonayo inuu ku yaab.
1. websites Block - Waxaad hadda ku hubin karnaa in caruurta ee qoyskaaga ma awoodaan in ay helaan wax kasta oo websites dadka waaweyn. Xitaa in aad xannibi karaa goobaha gaarka ah sida aad dareensan tahay ama ay doortaan goobaha in caruurta aad awoodi karaan inay galaan waa in.
2. Fun nabadgelyo - Waxaad u xanibi kartaa carruurtaada in ay keliya soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda iyo kulan ku haboon da'dooda ay awoodaan, oo weli la hubiyo in ay awoodaan in ay ku raaxaystaan ​​yihiin.
3. Isha ku hay - wararka ku saabsan hawlaha online aad caruur ayaa, sida laga daadiyo loo isticmaalo, goobaha la booqday, mar screen, iyo kulan u ciyaaray View.
4. Deji caadooyinka markii screen wanaagsan - Hadda waxaad la hadli kartaa caruurta ku saabsan caadooyinka wanaagsan iyo xuduud ku saabsan waxa qadar wakhti ay ku qaadan karaan ay shaashadaha mobile, hab xukumay ay hawlaha si ay u sii ammaan ah waqtiyada oo dhan.
Sida loo dhigay ilaa My Family for Windows Phone
Dejinta My Family waqtiga xaadirka ah aan la samayn karaa laga bilaabo telefoonka, waayo, kanu, waxaad u baahan doontaa in ay soo booqdaan goobta Windows Phone desktop. All in aad sameyso waa booqo website-ka - Windowsphone.com iyo gasho in aad xisaabta. Marka qortey, tuubada idinka aawadiin (kooxda gacanta sarre midig) iyo waxaad ka heli doontaa hoos u soo dejiyey iyadoo ay xulashada Qoyska My.
Riix ikhtiyaarka Qoyska iyo waa in la furo dariishadaha cusub oo aad u tilmaamaha ku saabsan waxa adeega waxay ku saabsan tahay iyo shuruudaha isticmaalka. Iyaga si taxadir leh u akhri ka dibna riix badhanka 'aan ku bilaabo'.
On shaashadda soo socda, ka jaftaa ikhtiyaarka oranaya Tag odhaatinkii qaybta 'dar ilmo' oo ka gala faahfaahinta akoonka Microsoft ee ilmahaaga.
Marka kor ku xusan looma samayn, waa in aad awood u aragtaa xidhiidhka ka on your My Family ama account Windows online ahaan. Waxaad awoodi doontaa in aad aragto go'an oggol yahay ee downloads kulankii kasta ee xubnaha qoyska; Waalidiinta sidoo kale Children.
Hadda, in la beddelo goobaha waayo, ilmuhu wuxuu ku daray in ay My Family, si fudud guji View Settings iyo ka furmo suuqa gujisid soo socda, dooro goobaha sida aad jeceshahay kulanka App + downloads. Waxaad sidoo kale u wareegi karaa ama filter Game rating ah.
Taasi waa, in aad si guul leh ku dhow ayaa ilaa My Family aad gmail Windows. Carruurtaada hadda awoodaan in ay u helaan oo ay kala soo bixi ay barnaamijyadooda iyo ciyaaraha sida goobaha aad ku qeexan waa in.
Sida loo dhaafayo My Family for Windows Phone
Si aad u dhaafayo My Family for Windows Phone, waxaad u leedahay in marka hore la gasho Account Microsoft in aad qorsheyneysid inaad isticmaasho aad Windows Phone oo aan My Family xisaabta waxaa laga yaabaa in aad isku dayday in ay ka taagay. Marka qortey, guji ikhtiyaarka ah "edit info shakhsiga ah '. Laga soo bilaabo halkan, waxaad bedeli kartaa taariikhaha dhalashada iyo ku daro da'da caruurta iyo dadka waaweyn sida.
Marka taariikhda dhalashada oo la soo dhigay in ka badan 18 jir, waa in aad kala soo bixi app kasta oo aad rabto in aad ka Windows Store ah, iyadoo wax dhibaato ah karo. Waxaa si kastaba ha ahaatee waa in la xusay in uu ku qaato dhawr daqiiqadood nidaamka ay u cusboonaysiiyaan, laakiin, mar lagu sameeyey, aad ku fiican tahay inuu tago.
> Resource > Windows > Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan My Family for Windows Phone